Bandhigga Japan ayaa soo saari doona shaashadda AMOLED ee iPhone | Wararka IPhone
Bandhigga Japan wuxuu isu diyaarinayaa inuu sameeyo bandhigyada AMOLED ee iPhone-ka sannadka 2018
Ma jiraan warar xan yar oo ka hadlaya Apple ayaa ku jiri doona Shaashadaha AMOLED loogu talagalay iPhone-ka mustaqbalka. Maanta waxaan helnay mid ka mid ah wararkan xanta ah ee xaqiijinaya in shirkadda soo saarta baararka hore ee Japan Display ay bilaabi doonto wax soo saar ballaaran oo shaashadda AMOLED ee iPhone-ka ah 2018, kaas oo horey u ahaan lahaa iPhone 8. Sida laga soo xigtay warbaahinta Japan Nikkan Kogyo Shimbun, Japan Diplay waxay kala xaajooneysaa Apple inay noqoto shirkad kale oo ka mid ah shirkadaha hore ee AMOLED ee iPhone marka ay timaado, sidaasna ku biiraya Samsung iyo LG.
Japan Shaxda wuxuu ahaa mid kamid ah labada shirkadood ee ugu sareeya iPhone LCD-bixiyeyaasha mudo dhowr sano ah hada, shirkada kale ee ugu weyn ee wax iibisa waa Sharp. Haddii xantaasi run tahay, shirkadda Japan ayaa iskeed u dejin lahayd ujeeddada ah inay ilaaliso ku xirnaanshaheeda soo saaridda noocan ah qayb ka mid ah taleefannada casriga ah ee tufaaxa la qaniinay iyo, laga yaabee, inay qaadanayso amarro badan oo la samayn lahaa Samsung iyo LG.
Ming-Chi Kuo Waxa kale oo uu ka hadlay suurtagalnimada in Apple adeegsato shaashadan noocan ah dhammaadka bisha Noofambar, laakiin wuxuu xaqiijiyey in Apple ay weli qaadan doonto dhawr sano oo ay ku darto shaashadda AMOLED taleefannadeeda casriga ah. Sida laga soo xigtay Kuo, Apple ma kori doono bandhigyada AMOLED ee taleefankiisa casriga ah illaa 2019.
Bandhigyada AMOLED ayaa bixiya midabo badan oo muuqda marka loo eego shaashadaha LCD, oo ah wax aan qof kastaa u jeclaan doonin si siman. Dhinaca kale, shaashadda noocan ah sidoo kale waxay yeelan kartaa a isticmaalka tamarta oo hooseeya, gaar ahaan sawirada halka midabka madow uu ku badan yahay. Apple Watch waxay horey u isticmaashay shaashad AMOLED ah, oo ah wax, oo ay weheliso isdhexgalka mugdiga ah, waxay ka caawineysaa smartwatch inuusan dhaqaajin batteriga si dhaqso badan, taas oo ka dhigi laheyd inay hesho dhaleeceyn ka badan inta ay heshay markii ay isticmaaleyaashu ogaadeen inaan ku soo dalacno daawo ku dhowaad maalin kasta.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in Apple ay u adeegsan doonto bandhigyada AMOLED taleefankeeda mustaqbalka. Waxa weli la ogaan waa goorma.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Bandhigga Japan wuxuu isu diyaarinayaa inuu sameeyo bandhigyada AMOLED ee iPhone-ka sannadka 2018
In 2018 .. Waxaa jiri doona shaashado aad uga wanaagsan Amoled, ma garanayo waxa laga filan karo !! Wax walba way ka hormarayaan isaga.
Kala soo bax Afterlight bilaash mahadnaqa barnaamijka Apple Store
Sidee loo hagaajiyaa iPhone-ka oo sii wadaya weydiinta magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah ee 'iCloud'